ကင်မရာပါသော micro နားကြပ်များ | Earpiece, Test on Cheating on Camera ကိုဝယ်ပါ - eXamYo.com
အဆိုပါ eXamYo မှကင်မရာပါသော Micro နားကြပ်များပါရှိသည် အပြည့်စုံဆုံးနှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားသောပစ္စည်းများဖြစ်သည် စာမေးပွဲများအတွက်ကူးယူ မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို။
သူတို့ကအမြင့်ဆုံးအဆင့်မြင့်ပါဝင်သည် ကင်မရာခလုတ် အဆိုပါပြသနိုင်ဖို့နှင့်အတူစျေးကွက်အပေါ် စာမေးပွဲမေးခွန်းများ သင့်ရဲ့ရန် ထောက်ပံ့သူ နှင့်ငါတို့သုံးမော်ဒယ်များ မျက်မြင်မရသောနားကြပ် အဖြေရရန်သင်ရွေးချယ်သော
ခွင့်ပြု ပိုမိုလွယ်ကူသောဘယ်တော့မှမဖြစ်၊ ပိုမိုစဉ်း စား၍ သင်၏အပြည့်အ ၀ ထုပ်ပိုးစရာမလိုပါ ကင်မရာပါသော micro နားကြပ်သင်အတူတကွ ၀ ယ်သောအခါထပ်မံသိမ်းဆည်းပါလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု သို့ စာမေးပွဲအတွက်ကူးယူပါလုံခြုံစိတ်ချရမှု နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်.
ကင်မရာပါသော micro နားကြပ် [BASIC KIT]
အဆိုပါ အသုံးအသက်သာဆုံး Micro Earpiece သည် Camera Kit နှင့်အတူ စျေးကွက်ပေါ်မှာ။ စာမေးပွဲများအတွက်ကူးယူပါ စုစုပေါင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ။ relay နှင့်အတူ တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကင်မရာ နှင့် စမ်းသပ် သင့်ရဲ့ကူညီသူမှမေးခွန်းများကို။ အဘို့အဖြေကိုလက်ခံရရှိ မိုက်ခရိုနားကြပ်။ Kit 100% မမြင်ရတဲ့. စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံအစုံ။ နှင့် ကင်မရာပါသော micro နားကြပ် [အခြေခံပစ္စည်းများ] သင်လုပ်နိုင်သည် စာမေးပွဲအောင်ပါ အလွယ်တကူပဲ!
အဆိုပါ အခြေခံပစ္စည်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် eXamYo Cam ခလုတ်ကင်မရာ နှင့် eXamYo Mini Micro နားကြပ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KIT မှာအတူတူသူတို့ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် စျေးနှုန်းချိုသာ သီးခြားစီထက်;) ဒီနှစ်ခုထုတ်ကုန်ပါစေ စမ်းသပ်မှုမဆိုအမျိုးအစားကိုရှောက်သွားရန်ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်.
အရေအတွက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 1 ဖြစ်ရမည်
7:00 pm အချိန်မတိုင်မီဝယ်ယူ နှင့် မနက်ဖြန်လက်ခံပါ
ကင်မရာပါ ၀ င်သည့် micro နားကြပ် [DELUXE KIT]
အဆိုပါ Micro Earpiece ကို Camera ဖြင့်ရောင်းလျှင်အကောင်းဆုံး စျေးကွက်ပေါ်မှာ Kit ။ စမ်းသပ်မှုများတွင်ကူးယူပါ စုစုပေါင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ။ Relay တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယို နှင့် စမ်းသပ် သင်၏လက်ထောက်အားမေးခွန်းများ ကင်မရာက။ အဘို့အဖြေကိုလက်ခံရရှိ မိုက်ခရိုနားကြပ်။ Kit 100% မမြင်ရတဲ့. စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံအစုံ။ နှင့် ကင်မရာပါသော micro နားကြပ် [DELUXE KIT] သင်တတ်နိုင်သမျှ စာမေးပွဲအောင်ပါ အလွယ်တကူပဲ!
အဆိုပါ DELUXE Kit ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် eXamYo Cam ခလုတ်ကင်မရာ နှင့် eXamYo ဂန္ထဝင် Micro Earpiece။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KIT မှာအတူတူသူတို့ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် စျေးနှုန်းချိုသာ သီးခြားစီထက်;;) ဒီထုတ်ကုန်နှစ်ခုပါစေ စမ်းသပ်မှုမဆိုအမျိုးအစားကိုရှောက်သွားရန်ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်.
ကင်မရာပါသော micro နားကြပ် [PREMIUM KIT]
ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံး အဆင့်မြင့် Micro Earpiece Camera Kit. စမ်းသပ်မှုများတွင်ကူးယူပါ စုစုပေါင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ။ Relay တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယို နှင့် စမ်းသပ် သင်၏လက်ထောက်အားမေးခွန်းများ ကင်မရာက။ အဘို့အဖြေကိုလက်ခံရရှိ မိုက်ခရိုနားကြပ်။ Kit 100% မမြင်ရတဲ့. စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံအစုံ။ နှင့် ကင်မရာပါသော micro နားကြပ် [PREMIUM KIT] မင်းလုပ်နိုင်တယ် စာမေးပွဲအောင်ပါ အလွယ်တကူပဲ!
အဆိုပါ ပရီမီယံပစ္စည်းများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်: eXamYo Cam ခလုတ်ကင်မရာ နှင့် eXamYo Pro မိုက်ခရိုနားကပ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KIT မှာအတူတူသူတို့ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် စျေးနှုန်းချိုသာ သီးခြားစီထက်;;) ဒီထုတ်ကုန်နှစ်ခုပါစေ စမ်းသပ်မှုမဆိုအမျိုးအစားကိုရှောက်သွားရန်ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်.
စမ်းသပ်မှုများအတွက် cheats အတွက်အထူး
အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့ 24 / 7
သင်၏မေးခွန်းများကိုတစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်၊
© 2009-2020 - eXamYo.com ™မှစွမ်းအားရှိသည်